မြန်မာနိုင်ငံ သို့ အစ္စလာမ်ရောက်ရှိလာပုံ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ပါဠိ ပါမောက္ခဆရာကြီး အဟ်မဒ်ကာစင်မ်
A Brief History of Modern Burma (Earliest record of two Muslim brothers before Buddhism arrived Bagan or First Myanmar Empire) »
(၁)ခရစ်သက္ကရာဇ် (၇၀၀-မှ ၁၅၀၀) အတွင်းအင်္ဂလန် နိုင်ငံတွင် နှင်းဆီစစ်ပွဲ (War of Rose ) စစ်ပွဲကြီးများ ဖြစ်ပွားနေဆဲ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရမ်းဗြဲကျွန်းအနီး အာရဘ် သဘောင်္တစ်စီး ပျက်ခဲ့ပြီး ၊ သဘောင်္ပေါ်ပါ အာရဘ် များသည် ရမ်းဗြဲ ကျွန်းတွင် အခြေစိုက် နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ (British Burma Gazatte , 1897)
အေဒီ (၆၅၂-၆၆၀) ပုဂံ၊ ပိတ်သုံမင်း ခေတ်တွင် အာရဗ်ကုန်သည် သဘောင်္များ သထုံ မုတ္တမ ဆိပ်ကမ်း မျာသို့ မကြာခဏ ၀င်ရောက်ကြကြောင်း ၊ အေဒီ (၈၀၀) ကျော်တွင်ရေးသား ခဲ့သော အာရဗ် မှတ်တမ်းများတွင် တွေ့ရပါသည်။(ဦးကြည် (ဘီအေ) ရာဇ၀င်ဂုဏ်ထူး၊ မြန်မာ့ရာဇ၀င်မှ သိမှတ်ဘွယ်ရာအဖြာဖြာ -စာ ၁၅၆၊၁၅၇)
(၂)ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအခြေချနေထိုင်ကြသော အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များမှာ (အီရန် )ပါရှား နိုင်ငံသားများဖြစ်သော ဖာရစီ လူမျိုးနွယ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဖာရစီမှ ပါရသီ၊ ပါရသီ မှ ပါသီ၊ ပါသီမှ ပသီ ဟု မြန်မာ အသံဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အထောက်အထားများမှာ……………….
(မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း ၊ အတွဲ ( ၆) စာ -၃၅၀ ) (၁၉၅၅ -၅၆ ခုနှစ်ထုတ် ပုသိမ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း သား ကျောင်းသူများ မဂ္ဂဇင်း ၊ စာ-၅) (ဦးမာဃ ၊ပုသိမ် ရာဇ၀င် ၊စာ- ၁၃၇)
ထိုဖာရစီ -ပသီများမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အီရန်အနွယ် ၀င်များဖြစ်ကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းတွင် ဦးစွာ အခြေချ နေထိုင်သူများမှာ ဘင်္ဂါလီများမဟုတ်ပဲ အီရာန် နွယ်ဖွား ပသီ မွတ်ဆလင်မ်များသာ ဖြစ်ပါသည်။ထို့အတူ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသို့လည်း အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ ၀င်ရောက်နေ၍ အခြေချနေထိုင်သည်များရှိပါသည်။
(၃)အေဒီ (၁၂၅၅-၁၂၈၅) ပုဂံမင်းဆက် ၊ နရပတေ့မင်း လက်ထက်တွင် တရုတ်တို့နှင့် စစ်ဖြစ်ပွားခဲ့ ပါသည်။ တရုတ်စစ်တပ် (တာတာ စစ်တပ်) ၏ အကြီးအမှူးမှာ ဗိုလ်မှူးနဇရွတ်ဒင်း (အစ္စလာမ် အာရဗ်အမည်) ဖြစ်ပါသည်။ (၁၃၇၃-၇၄ ခုနှစ်တွင် စိုက်ထူခဲ့သော ရတနာစေတီ ကျောက်စာ)
(၁၄)ရာစုနှစ်များအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမြိတ်မြို့သို့ အာရဘ်ကုန်သည် များရောက်ရှိရုံသာမက ၊မြိတ်မြို့ နောက်လယ်ရပ်တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။(မောရစ်ကောလစ် Into Hidden Burma ) (ဦးခင်မောင်ကြီး ၊ဗြိတိသျှ သံဖနောင့်အောက်မှ မြန်မာပြည် ၊ ဒုတိယတွဲ -စာ ၂၀၇)
အေဒီ ( ၁၄၀၄ မှ ၁၆၀၂) အထိ ရခိုင်ဘုရင်များသည် မွတ်ဆလင်မ်ဘွဲ့ အမည်များ တပ်ခဲ့ပါသည်။ (မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ထုတ် ၊ အခြေပြ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး သမိုင်း၊ ပ-တွဲ။ စာမျက်နှာ -၃၈၇ )
(၁၄၅၉ -၈၂) တွင်မင်းဖြစ်ခဲ့သူ ဘစောဖြူလက်ထက်တွင်ရခိုင်ပြည်သုံး ကျပ်ဒင်္ဂါများတွင် အစ္စလာမ် ယုံကြည်ချက် အာရဗီစာသားများ ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ ရခိုင်ဘုရင် အတော်များများ ၏ အင်အားမှာ မသေးသောကြောင့် ဘင်္ဂလား ၁၂မြို့မှ ရခိုင် ဘုရင်များကို လက်ဆောင်ပဏ္ဍာ များဆက် သ ခဲ့ကြကြောင်း သမိုင်းအထောက်အထား များတွေ့ရပါသည်။
(၁၆၆၀) ခုနှစ်တွင် ရခိုင်ဘုရင်ဖြစ်လာသော စန္ဒဓမ္မမင်းလက်ထက်တွင် အိန္ဒိယ ပြည်မဂို ဘုရင် သြရန် ဂဇစ် နှင့် ညီတော် ရှာရှုဂျာ မင်းသားတို့ နန်းလုခဲ့ကြရာမှ ရှာရှုဂျာ မင်းသား အရေး နိမ့်ပြီ ချွေယံသင်းပင်းများနှင့် ရခိုင် ဘုရင်ထံ ခိုလှုံခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသူများ ၏ အဆက်အနွယ်များမှာ “ကမန်” တိုင်းရင်းသားများဖြစ်လာပါသည်။ (ပသီ ဦးကိုလေး၊ မြန်မာပြည်နှင့် အစ္စလာမ်သာသနာ)
အေဒီ (၁၅၃၀-၁၅၅၀) တွင်တောင်ငူ ဘု၇င်တပင်ရွှေထီးလက်ထက်တွင် ၄င်း၏ တပ်များက မွန်တို့ဌာနေ ဟံသာဝတီ ကို ချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ မွန်တို့ဘက်မှ ပသီပန်းသေးများ က မြို့ထိပ်မှ စိန်ပြောင်း မြတပူ တို့ဖြင့် ပစ်လွတ်နေ၍ အရှအနာများပြီးရှေ့ မတိုးနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်(မှန်နန်းရာဇ၀င် တော်ကြီး၊ ဒုတိယတွဲ ၊စာ-၁၈၆ )တောင်ငူရာဇ၀င် စာ-၂၉၆)
ထို ပသီပန်းသေးတို့မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တရုတ်အနွယ်မွန်နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြပါသည်။ ၄င်းတို့ ဘင်္ဂါလီများ ဟုတ်ကြပဲ မွန် မွတ်ဆလင်မ်များ ဖြစ်ပါသည်။
အေဒီ ( ၁၆၀၅-၁၆၈၂)အတွင်း တောင်ငူဘုရင် အနောက်ဘက်လွန်မင်း ခေတ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခေတ်တွင် သန်လျင်မြို့မှ ပေါ်တူကီလူမျိုး ငဇင်ကာ ပုန်ကန်ခြားနားလာသဖြင့် အနောက် ဘက်လွန်မင်းတပ်များ သန်လျင်ကို ချီတက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ငဇင်ကာ က အိန္ဒိယ မှ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် စစ်သားများ ပါဝင်သော စစ်သင်္ဘော ၅စင်း ကို ငှားရမ်းခေါ်ယူခဲ့ပါသည်။ ဘုရင့်စစ်သည် များအောင်နိုင်၍ ငဇင်ကာ အသတ်ခံရပါသည်။ စစ်သင်္ဘော ၅စင်းအနက် ၄စင်းကို စစ်သားများ ဖမ်းမိခဲ့သည်။ လှေတပ်ဝန်မင်း ရဲကျော်ထင် ၏လျှောက်ထားခဲ့ရာ မင်းကြီး က ပသီ တို့ကို မသတ် မညှစ်ရ ဟု အမိန့်ထုတ်ပြီး ဖမ်းဆီခေါ်ဆောင်လာစေခဲ့ပြီး ယင်းသုံ့ပန်းများ ကို ရွှေဘို မြို့မြောက် ဘက်ရပ်နှင့် အင်းဝ မြောက်ဘက်တို့တွင် အစုခွဲ ပြီးနေရာချထားပေးခဲ့ပါသည်။ (မှန်နန်း ရာဇ၀င်၊ တတိယတွဲ၊စာ ၁၇၂ )
အနောက်ဘက်လွန်မင်း လွန်ပြီးနောက် (၁၆၂၉-၁၆၄၈) တွင်နန်းတက်သော သာလွန်မင်း လက်ထက်တွင် ဘုရင့် အမိန့်တော်နှင့် ဖမ်းဆီးရမိလာသော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တို့ကို ရွှေဘို နယ်၊ စစ်ကိုင်းနယ်၊ ကျောက်ဆည်နယ်၊ တို့တွင် လုပ်မြေ၊နေမြေ များပေး၍ အတည်တကျ နေရာချထား ပေး၏ ။ ဘုရင့်ကိုယ်ရံတော်တပ်တွင် လည်းသေနက်ကိုင် စစ်မှုထမ်းများ အနေဖြင့် ခန့်ထား ခဲ့၏။ (ဦးဘသန်း၊ ကျောင်းသုံးမြန်မာ ရာဇ၀င်) စာ-၂၇၀)
အေဒီ (၁၆၉၈-၁၇၁၄) အတွင်း စနေမင်းထံသို့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသား (၃၀၀) ကျော်သည် ရခိုင်ဒေသမှ တဆင့် ၀င်ရောက်ခိုလှုံလာကြသည်။ ၄င်းတို့အထဲတွင်စစ်ရေးကျွမ်းကျင် သူ ဗိုလ်မှူး စစ်မှူးများပါ လာကြသည် ။ ထို့ကြောင့် ၄င်းတို့ကို တစ်စုတစ်ဝေး ထဲမထားသင့် ဟု မှူးမတ်များက ဘုရင့်ကို လျှောက်တင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၇၀၉ ခုနှစ်တွင် ၄င်းတို့ကို ဘုရင့်အမိန့်တော်နှင့် လူစုခွဲပြီးနေရာ ချထားပေးခဲ့ပါသည်။ ချထားသော နေရာများမှာ တောင်ငူ၊ရမည်းသင်း ၊ ညောင်ရမ်း၊ ယင်းတော်၊ မိတ္ထီလာ ပင်းတလဲ ၊ ဗောဓိ ၊ စည်သာ၊ စည်ပုတ္တရာ ၊မြေတူး၊ ဒီပဲယင်း စသော ၁၂မြို့မှာ ပသီ ၁၂ အုပ်စု နေရာခွဲချထားပေးပါသည်။
ယနေ့ ရွှေဘို မြောက်လက်မှာ ရှိကြသော (၃၇၀၀) အနွယ်များမှာ ဤအနွယ်များဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့ သည် ဘင်္ဂလီ များ မဟုတ်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံ သားခံယူလာကြသူ အိန္ဒိယ အနွယ် အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များ သာဖြစ်ပါ သည်
အလောင်းမင်းတရားလက်ထက် အောက်ပြည်အောက်ရွာသို့ ချီတက်တိုက်ခိုက်ရာတွင် မွန်စစ် သူကြီး တလပန်း နှင့်ပြည်မြို့ အနီး တိုက်ခဲ့ရသည်။ မွန်တို့ဖတ်မှ ပသီကုလား ၊ ပန်းသေး တို့က မြောက် စိန်ပြောင်း နှင့်လှမ်းကာပစ်လွှတ် လေလျှင် ရဲမတ်တော် အပေါင်းတို့ ထိပါးသေဆုံးသည်ကား မရေ တွက်နိုင်အောင်ရှိ၏။ (လက်ဝဲအနော်ရထာ၊ အလောင်းဘုရား အရေးတော်ပုံမှတ်တမ်းများ ၊စာ -၇၀)
အလောင်းမင်းတရား ရန်ကုန်ကိုအောင်နိုင် သောအခါ မွန်တို့ဘက်မှ အလောင်းမင်းတရားကြီး ကို သစ္စာခံကြသည်။ထိုသစ္စာ ခံ တပ်များထဲတွင် တစ်ကျွန်းသား ပသီကုလား သင်္ဘောသူဌေး (၄)ဦးတို့ လည်း ရွှေရက် ငွေရက် အုပ်မျိုးထည်မျိုး သေနက်လက်နက် လက်ဆောင်တောများ ဆက်သ၍ သင်္ဘော၎စင်းနှင့် တကွ အမှုတော်ကိုထမ်းပါမည် ဟု ခြေတော်ရင်း ခိုဝင်လာ၏။ (အလောင်းဘုရား အရေးတော်ပုံ မှတ်တမ်း စာ ၇၇)
ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရန် လူမျိုးပေါင်းစုံထဲမှ သင့်တော်သူများကို သွေးသောက်ကြီးများအဖြစ် လိုက် ပါစေခဲ့၏။(ကုန်းဘောင် ခေတ် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး ပ တွဲ၊စာ ၁၈၅-၁၈၆)
ဤသည်ကား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ ကို ဘုရင်မင်းမြတ်က ယုံကြည်စိတ်ချ၍ ရာထူးကြီးများ ပေးခဲ့ သော အထောက် အထား ပင် ဖြစ်သည်။ဆက်လက်၍ အလောင်းမင်း တရား ကြီသည် သန်လျင်မြို့ သို့ချီတက်တိုက်ခိုက်ပြန်ပါသည်။ သန်လျင်ကို အောင်မြင်၍ အိန္ဒိယ ပြည် မှ သင်္ဘောလေးစင်း ပါ စစ်သား များ ကိုလည်း စစ်မှုထမ်းစေခဲ့၏။ (တွင်းသင်းတိုက်ဝန် ရေး၊ အလောင်းဘုရား အရေးတော်ပုံ မှတ်တမ်း ၊စာ – ၂၀၃)
ယင်းသို့ မြန်မာဘုရင် မွန်ဘုရင် တို့ထံတွင် ၀င်ရောက်အမှုထမ်းနေသူများမှာ ဘင်္ဂါလီများ မဟုတ်ကြပဲ ပသီ-ပန်းသေး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ သာဖြစ်ပါသည်။
ခရစ်သက္ကရာဇ် (၁၇၈၁-၁၈၁၈) (ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၁၁၄၃-၁၁၈၁) အမရပူရနန်းတည် ဘိုးတော်ဦးဝိုင်း (ပဒုံမင်း) လက် ထက် ပသီများအတွက် အာပစ်ရှာ ဟိုသိန္ဒိ ကို တရားသူကြီး အဖြစ်ခန့်ကြောင်း အမိန့်တော် ပြန်တမ်းထုတ်ခဲ့ပါသည်။ (ဘိုးတော် မင်းတရားကြီး ၏ ရာဇသတ်ကြီး (ခ) အမိန့်တော်ပြန်တမ်း ကြီး ၊အတွဲ (၄) ၊စာ-၁၇၆) ထိုခေတ်မှာပင် ရမ္မာ ၀တီ မြို့ ၀န် ၊ရွှေတောင် သာဂသူ စာဆိုတော်ကြီး ဦးနု (ခ ) မိုဟမ္မဒ် ကာစင်ကို အိန္ဒိယ ပြည်သွားရောက်၍ သက္ကဋ ကျမ်း ၊ ဟိန္ဒူ ကျမ်း ၊ နှင့် ပသီကျမ်း များကို သယ်ယူသည့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပါ သည်။ (ကုန်းဘောင် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး ဒု-တွဲ၊ စာ-၁၅၇/၁၆၆)
ဘုရင်သစ္စာခံ ယင်းအရာရှိကြီးများမှာ ဘင်္ဂါလီများမဟုတ်ကြပဲ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံသား မင်းမှုထမ်းများသာ ဖြစ်ပါသည်။(၁၀) နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှ များမြန်မာနိုင်ငံကို စတင် ထိပါးလာစဉ် ရမူး ပန်းဝါ စစ်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ယင်းစစ်ပွဲကို မြန်မာတို့နိုင်လိုက် ၍ ရန်သူများထံမှ အမြောက်ကြီး ၁ လက် ၊ သေနက် ၂၀၀ ကျော် ၊ နှင့် စစ်ပါရီကုလား သုံ့ပန်း (၂၀၀) ကျော် ရလိုက်ပါသည်။ ယင်းသုံ့ပန်း များကို ဘုရင့် နေပြည်တော် တောင်ဘက် (မြစ်သားချောင်းတောင်ဘက် ) မှာနေရာချထား ပေးခဲ့ သည်။(ကုန်းဘောင် ဆက်မဟာ ရာဇ၀င်တော်ကြီး ၊ ဒု-တွဲ၊ စာ – ၃၇၇)
ရမူးပန်းဝါ တိုက်ပွဲ မစမီ မြန်မာ တပ်မတော်မှ တပ်မှူးတပ်သားများ လှံရှည် ၊ အဲမောင်း ၊ များကို ကိုင်၍ စစ်ရေး ပြစေခဲ့ ပါသည်။ ထိုစစ်ရေး ပြရာတွင် တပ်ဗိုလ် နေမျိုးဂုဏ် နရပ် ဘွဲ့ ရ ခန်ဆပ်ဗိုလ် ဦးစီးသော မြင်းစီးရေး (၇၀)ကျော်က မြင်းရေး ကစား သည်ကို စစ် ခေါင်းဆောင်ကြီး ၀န်ကြီး သတိုး မဟာဗန္ဓ္ဓုလ က ရွှေထီးဖြန့်ပြီး ရှုစားတော်မူခဲ့သည်။(ကုန်းဘောင် ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး ၊ ဒု-တွဲ ၊စာ – ၃၉၂)
ယင်းခန်ဆပ်ဗိုလ် ကို ဘကြီးတော် မင်းက ယွန်းကြီးပြည် ဟု ခေါ်သော အင်ဒိုချိုင်းနားသို့ မြန်မာ ဘုရင်၏ သံကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် သံကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် စေလွတ်ခဲ့ရသည်။ ယင်းခန် ဆပ်ဗိုလ် မှာ မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်နှင့်သီပေါမင်း လက်ထက် အလွန်ကျော်ကြားခဲ့သော ၀လီခန် မြင်းတပ် ဗိုလ် ၀လီခန် ၏ ဘခင်ဖြစ်သည်။
ဘကြီးတော်က တိုင်းပြည်နှင့် ဘုရင့်အပေါ် သစ္စာရှိပြီး တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြသော တပ်မတော်သား များကို ဂုဏ်ပြုရာတွင် ကုလား ပျို သေနက်အစုသား ၊(၁၃၀၀) ကျော်တို့အား ဘောက် တို ရွှေပိန်၊မျဉ်းတို သက္ကလပ် စိမ်း၊ မျဉ်းရှည် သက္ကလပ်နီ၊ သက္ကလပ် စိမ်း အဖြူဆင့် တို့ကို ချီးမြင့်ခဲ့ပါ သည်။ (ကုန်းဘောင်ခေတ် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး၊ ဒုတိယတွဲ ၊စာ – ၄၇၇)
သာယာဝတီ မင်း (၁၈၄၁) ခုနှစ်တွင် ဥက္ကလာပသို့ ချီတက်တိုက်ခိုက်ရာတွင်လည် ပသီ အမြောက် အမှု ထမ်း ၁၀၀ ကျော်ပါ ၀င်ခဲ့ပါ သည်။(ကုန်းဘောင် ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး ၊တတိယတွဲ – စာ ၆)
မင်းတုန်းမင်း နှင့် ကနောင်မင်းသား တို့ နောင်တော် ပုဂံမင်းသား ကိုခြားနားရာတွင် ကုလားပျို သေနတ်အစုသား များပါဝင်ခဲ့သည်။(ကုန်းဘောင် ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော် ကြီး တတိယတွဲ၊ စာ – ၁၃၉)
မင်းတုန်းမင်လက်ထက် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရန် စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းရာတွင် (၁)ရံဖြိုခွင်း(၂) ရံပုံခွင်း(၃) ရဲကင်း (၄) ရဲလင်း(၅) လက်မနှိပ် ဟူသော အမြောက်တပ်ကြီးများတွင် တပ်မှူး တပ်သားများမှာ ကင်းတား ကုလားပျို မြေတူးပသီများ ပါဝင်ကြပါသည်။(ဦးမောင်မောင်တင် ၊မဟာဝိဇ္ဖာ မြန်မာမင်း လက်ထက် စာတမ်းများ စာ – ၆၆ -၇၁-၇၂)
မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၂၁၅) (၁၈၅၃ အေဒီ)ခုနှစ် တွင် မင်းတုန်းမင်းကြီး က မြေနန်းတော် ကို ထွက်ပြီး ဥပုသ် ယူခဲ့ပါသည်။ ယင်းအခန်းအနားတွင် မင်းမှုထမ်းများကိုလည်း ကျွေးမွေးပြုစု ခဲ့ပါသည်။ သာသနာရေးအရ သီးခြားစားသုံးရမည့် အက္ကပတ် မြင်းတပ်၊ စားထိုးမြင်းတပ် ၊ ။၀လီခန်း မြင်းတပ် ၊ ကသည်းမြင်းတပ် တို့မှ မြင်းစီးအမှုထမ်း (၇၀၀) ကျော် တို့ကို ပုဆိုးခေါင်း ပေါင်းများ ပေးလှူပြီး ဘာသာ ထမင်းချက်ပြုတ် ကျွေးမွေး စေတော်မူ သည်။ (ကုန်းဘောင် ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး ၊တတိယတွဲ- စာ ၁၇၀)
မင်းတုန်းမင်း လက်ထက်တွင် နိုင်ငံတွင်းနေ အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်များအတွက် သာသနာ့ကျင့်စဉ် အရ အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်ရန် ကာဘူလ် မော်လ၀ီကြီး ကို ဓမ္မသတ် မှူးအဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန် ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၂၁၈) တပေါင်း လ ဆန်း ၃ရက် နေ့တွင်ရတနာပုံ မန္တလေးမြို့ တည် ရေးအတွက် လူပေါင်းများစွာ နှင့် မြို့ကွက်ရှင်းရာ ဗိုလ်မင်းထင်ရာဇာ ဦးစီး သော ပသီအမျိုးသား (၄၀၀) ကျော် ပါဝင်ခဲပါသည်။ သက္ကရာဇ် ၁၂၁၉ ၀ါခေါင်လဆန်း ၁၂ရက်နေ့တွင် မန္တလေးမြို့ သို့ မင်းနေပြည်တော်ပြောင်း ရွှေ့ရာတွင် လူမျိုးပေါင်းစုံကို အစုလိုက် နေရာချ ထားပေးပါသည်။ ပသီလူမျိုး ဟု သတ်မှတ် ထား သော အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအတွက် (၁)စစ်ကိုင်းတန်း (၂) ကန်းရိုးတန်း(၃) တောင်ပလူ(၄)အိုးဘို (၅) စကြာ နွယ် ဇင်(၆) ဂျွန်းအမြောက်တန်း(၇) ၀လီခန် ရပ်(၈) တိုက်တန်း ရပ်ကွက် (၉) ကိုယ်ရံတော်ရပ် (၁၀) အချုပ်တန်း ရပ်ကွက်(၁၁)ကုလားပျို ရပ်ကွက် စုစုပေါင်း ၁၁ရပ်ကွက် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။
ထိုရပ်ကွက်တို့အတွက် ဗလီပေါင်း ၂၀ ကိုလည်းသတ်မှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဘုရင့်ကိုယ် ရံတော်ဖြစ်သော ရွေးလက်ယာ တပ်သားများအတွက် ရွှေပုန္နက်ဗလီ တစ်လုံးဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ဗြိတိသျှ နယ်ချဲ့တို့ ယင်းဗလီကို ဖျက်စီးခဲ့ပါသည်။(ပသီကိုလေး၊ မြန်မာပြည်နှင့် အစ္စလာမ်သာသနာ အနှစ် ၂၀ မြောက် အစ္စလာမ် ဓမ္မဗိမာန် အထူးထုတ် စာစောင် ၊ စာ ၁၀၅)
ထို့ပြင် မင်းတုန်းမင်း တရားကြီး က မြန်မာနိုင်ငံမှ အစ္စလာမ်သာသာဝင်များ ဟဂ်ျပြုရာတွင် တည်းခိုနိုင် ရေးအတွက် မက္ကာမြို့ တွင် ဒေါင်းဇရပ်ကြီး တစ်ဆောင်ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ထိုဇရပ်ကြီး သွားရောက်ဆောက်လုပ်ရန် နေမျိုး ဂုဏ္ဏ ဘွဲ့ ရ ခလီဖွာ သခင်ကြီး ဦးဘိုးမြ နှင့် ဟာဂျီ ဦးရွှေဘော် တို့ကို တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာအစ္စလာမ် ဘာသာ ၀င် များ လှူဒါန်းငွေနှင့် လိုသမျှ ကို မင်းတရားကြီးက စိုက်ထုတ် လှူဒါန်းခဲပါသည်။(မြေတူးမြို့ ပလီထိုင်ဆရာကြီး ဦးရွှေတောင်ပြုစု သော လင်္ကာ )
သီပေါမင်းလက်ထက် ၁၂၄၁ ခုနှစ် ၊ သီတင်းကျွတ် လကုန်ပိုင်းတွင် တပ်ခင်းရန် ဘုရင်က အမိန့်တော် ထုတ်ဆင့်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခါ ကင်းတား ကုလားပျို သေနက်ကိုင် ဗိုလ်မင်းထင်ကျော်သူ နှင့်ကင်းတာ ကုလားပျိုအစု သေနက် ကိုင်စွဲသူ လူ ၃၅၀ တပ်တစ်တပ် ၊စကြာင်္အမြောက် ဗိုလ်ဟာရှင် နှင့် အမြောက် အမှုထမ်း လူ(၁၁၃) တစ်တပ်၊ မင်္ဂလာအမြောက် ဗိုလ်ဦးကြယ် နှင့် လူ (၁၁၃) တစ်တပ်၊ မင်္ဂလာအမြောက် ဆူးလေကုန်း ဗိုလ် ဦးမောင် နှင့် အမှုထမ်း လူ (၁၁၃) တစ်တပ် မင်္ဂလာ အမြောက် ဘုံးအို ဘို ဗိုလ်ဦးယောက်နှင့် အမှုထမ်း လူ (၁၁၃) တစ်တပ်ကို စစ်အင်္ဂါ ခင်း ပြခဲ့ပါသည်။ (ကုန်းဘောင် ဆက် မဟာ ရာဇ၀င်တော်ကြီး ၊ တတိယတွဲ ၊ စာ-၅၂၄/၅၂၆)
သီပေါမင်းလက်ထက် နောက်ဆုံး အင်္ဂလိပ် မြန်မာစစ်ပွဲတွင် တောင်တွင်းကြီး စစ်ကြောင်းကို အက္ကပတ် မြင်းဝန် ပင်လယ်မြို့စား ကြီး မဟာ မင်းထင်ရာဇာ (ဦးခြုံ)က ဦးစီးခဲ့ရပါ သည်။ (ကုန်းဘောင်ဆက် မဟာရာဇ၀င်တော်ကြီး ၊ တတိယတွဲ၊စာ ၇၁၂-၇၁၅)
This entry was posted on November 17, 2014 at 10:37 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.